Myanmar has agreed to the appointment of Mr. João Freitas de Câmara as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Democratic Republic of Timor-Leste to the Republic of the Union of Myanmar in succession to His Excellency Mr. Jose Antonio Amorin Dias – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar has agreed to the appointment of Mr. João Freitas de Câmara as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Democratic Republic of Timor-Leste to the Republic of the Union of Myanmar in succession to His Excellency Mr. Jose Antonio Amorin Dias
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. João Freitas de Câmara as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Democratic Republic of Timor-Leste to the Republic of the Union of Myanmar in succession to His Excellency Mr. Jose Antonio Amorin Dias.
Mr. João Freitas de Câmara was born on 24 June 1955 in Lepo, Zumalai subdistrict,Timor-Leste. He obtainedaBachelor’s degree in Law from Atma Jaya Catholic University in Jakarta, Indonesia andaMaster’s degree in Management and Organization Development (MMOD) from Thailand.
From 2006-2008, he served as Secretary General at the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of Democratic Republic of Timor-Leste. He was accredited to the Kingdom of Thailand as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Democratic Republic of Timor-Leste from 2008-2012. From 2012-2014, he served as Director-General for the External Relations Department, and currently, he is serving as Director-General for Asia and Pacific Department of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste.
Mr. João Freitas de Câmara is married, and has five children.
Dated:9December 2015
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ တီမောလက်စ်တေ ဒီမိုကရက် တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အဖြစ် မစ္စတာ ဟိုဆေး အန်တိုနီယို အမိုရင် ဒီအက်စ် ၏ နေရာတွင် မစ္စတာ ဂျိုအာ ဖရိတက်စ် ဒီ ကမ်မာရာအား ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။
မစ္စတာ ဂျိုအာ ဖရိတက်စ် ဒီ ကမ်မာရာ ကို ၁၉၅၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လီပိုရွာ၊ ဇူမာလိုင် မြို့နယ်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အက်မားဂျာယာ ကက်သလစ်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည် ၂၀၀၆-၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈-၂၀၁၂ခုနှစ် အတွင်း ထိုင်း နိုင်ငံဆိုင်ရာ တီမောလက်စ်တေ သံအမတ်ကြီး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၄ခုနှစ် အထိ တီမောလက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှနှင့် ပစိဖိတ် ဆိုင်ရာဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
မစ္စတာ ဂျိုအာ ဖရိတက်စ် ဒီ ကမ်မာရာ သည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ သားသမီး(၅)ဦး ရှိသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်